Paunenge Uri Kudya Kudya kwemanheru uye Kuona TV, Isu Tanga tichivaka Mabhizinesi | Martech Zone
Vhiki rino, 57 muzvinabhizimusi anga achishanda kutanga mabhizinesi matsva manomwe. Kubva pane zvishandiso zve software nesocial media kune inotakurika laptop tafura, iwo mazano ari kutanga kuuya pamwechete.
Uye kana iwe uchida kuziva zvakakwana kuti zvese izvi zvichaitika sei, uye chii icho vatongi (kusanganisira Douglas Karr) funga nezvemazano ebhizinesi, tibatane nesu kunetiweki uye mharidzo dzekupedzisira neSvondo manheru: http://www.eventbrite.com/event/851407583
Tags: indianapoliskuvhura bhizinesitangakutanga kwevhiki
Mbudzi 13, 2010 na1: 21 PM
Imwe yemakambani atiri kushanda pairi inonzi eatdrinkit. Tichava pakudya.rink uye iwe unogona kutitevera @eatdritit. Ramba uchitarisa, isu tichaburitsa rumwe ruzivo apo isu tinoswedera padhuze nemusi weSvondo. Tinoda kukuona iwe ipapo padanda kuti ugone kuvhota kuti ushandise. Ndinofunga iwe unofarira zvatiri kuita!